Core i Series Processor တွေအကြောင်း - MYSTERY ZILLION
Core i Series Processor တွေအကြောင်း
July 2010 edited July 2010 in My Article
Intel ဟာ လေးနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက် Processor တွေကို မျိုးဆက်သစ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလေ့ရှိပါတယ်။
- - ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်မှာ P3 370 pin တွေခေတ် စကုန်ပြီး P4 478 Pin တွေခေတ်စလာပါတယ်။
- - ၂၀၀၄ လောက်မှာ 478 pin တွေဇာတ်သိမ်းပြီး 775 pin series တွေ စထွက်လာပါတယ်။ P4 နောက်ပိုင်း Series တွေ၊ Pentium D အမျိုးအစားတွေ၊ နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Duocore, Core2Duo, Core2Quard စတာတွေပေါ်လာပါတယ်။
- - ၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်မှာတော့ Core i7 Processor တွေပေါ်လာပါတယ်။ 1366 pin တွေနဲ့ပေါ့။
-- ၂၀၁၂ ဘာ Processor တွေထွက်လာဦးမလဲ вЂ¦ ဘယ်လောက်များ အစွမ်းထက်လာဦးမလဲ вЂ¦. ?
သေချာတာကတော့ вЂ¦ Processor Series တွေပြောင်းလာတာနဲ့တူ Motherboard တွေပါ အသစ် အသစ်တွေပြောင်းသုံးလာခဲ့ရတာပါပဲ။
Core i7 တွေဟာ ကွန်ပြူတာလောကမှာ လက်ရှိမှာတော့ အမြန်ဆုံး Processor တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ချည်းပဲတောင် စျေးနှုန်းက ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော်နေတော့ စျေးကွက်မှာ ရောင်းဖို့၊ လက်တွေ့မှာ အသုံးပြုဖို့ အခက်အခဲ ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် Pin အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပြီး စျေးနှုန်းမှာပါအများကြီးသက်သာတဲ့ 1156 Pin ရှိတဲ့ Core i7 အမျိုးအစားတွေကို ၂၀၀၉ မှာ စပြီးထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ စျေးနှုန်းပိုချိုသာတဲ့ Core i3, Core i5 တွေကို ဆက်တိုက်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဘန်းကျော်မှာ Core i7 Processor ပါတဲ့ စက်တွေသိပ်မသုံးသေးပေမဲ့ Computer အသစ်၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် Core i3, Core i5 ပါတဲ့စက်တွေကိုပဲ ရွေးချယ်၀ယ်ယူကြတာပါ။
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ 775 တွေကို ဘိုုင့်ဘိုင်လုပ်ပြီး 1156 တွေကို ထွေးပွေ့ရတော့မှာပါ။ သို့သော် 1366 တွေကတော့ အမြင့်ကပန်းပွင့်ရယ်မို့ ကြွေကျလာပါမှပဲ ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာပါပဲ …. ( ကောင်မလေးကို ရည်းစားစာပေးတုန်းကလဲ ဒီအသုံးအနှုန်းပါပဲ ….. :P … )
Core i7 1366 Pin တွေက ၂၀၀၈ မှာ ပထမဆုံး i7 Series အနေနဲ့စထွက်ပါတယ်။ 1366 Pin Processor တွေကို Model --- i7-940, i7-950, i7-960, i7-975 တွေအနေနဲ့ထုတ်ပါတယ်။ i7-975 က အမြင့်ဆုံးပါ။ i7 Processor အားလုံးမှာ core လေးလုံးပါပါတယ်။
Core i7 has got4core … Core2Quard has also got4core … ဆိုပေမဲ့ Core2Quard တွေကစျေးနှုန်းအများကြီးသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကကွာခြားတာက CUP နဲ့ Chipset တွေကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ Front Side Bus (FSB) ဟာ Core i7 မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ FSB အစား Quick Path Interconnect (QPI) ပါလာပါတယ်။ အဲဒီနည်းပညာဟာ FSB ရဲ့ Data Transfer Rate ထက် ၂ဆပိုမြန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က 775 Pin တွေမှာ မတွေ့ရတော့တဲ့ Hyperthreading စနစ်ဟာ i7 တွေမှာ ပြန်ပါလာပါတယ်။
Core i7 ရဲ့ အစောပိုင်းမော်ဒယ်တွေက စျေးကြီးလို့ လူအများမတတ်နိုင်တာကြောင့် စျေးနှုန်းပိုချိုတဲ့ 1156 Pin Core i7 တွေကို မော်ဒယ်နှစ်မျိုးနဲ့ထပ်ထုတ်ပါတယ်။ i7-860 နဲ့ i7-870 တွေဖြစ်ပါတယ်။ 1366 Pin တွေနဲ့ယှဉ်ရင် စျေးနှုန်း တစ်၀က်လောက်သက်သာပေမဲ့ Performance မှာတော့ 10% လောက်ပဲလျော့နည်းပါတယ်။
Core i5 & Core i3 အကြောင်း နောက်နေ့မှပဲ ဆက်ရေးပါဦးမယ် .................
Core i7 has got4core вЂ¦ Core2Quard has also got4core вЂ¦ ဆိုပေမဲ့ Core2Quard တွေကစျေးနှုန်းအများကြီးသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကကွာခြားတာက CUP နဲ့ Chipset တွေကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ Front Side Bus (FSB) ဟာ Core i7 မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ FSB အစား Quick Path Interconnect (QPI) ပါလာပါတယ်။ အဲဒီနည်းပညာဟာ FSB ရဲ့ Data Transfer Rate ထက် ၂ဆပိုမြန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က 775 Pin တွေမှာ မတွေ့ရတော့တဲ့ Hyperthreading စနစ်ဟာ i7 တွေမှာ ပြန်ပါလာပါတယ်။
ကို Alexander ကြီးက ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတာပဲ .. အဟတ်
ပေါ်လာတော့လည်း ကိုးတွေနဲ့ပြန်ပေါ်လာတကိုး .. ... ဟီး .. Core i3 နဲ့ Core i5 ကိုစောင့်မျှော်လျှက် ..
ကို alex ေ၇ အခုလောလောဆယ် i7 980X က နောက်ဆုံးထွက်ပါတယ်6cores , 12 Mb (L2 Cache) , 3.3GHz , 6.4 GT/s ပါ..
စျေးကလဲ လန်ထွက်နေတာပဲ $999 ပါ
check on intel website .
[FONT="]Core i7 တွေစျေးကြီးလို့ စျေးလျော့ပြီးထပ်ထွက်လာတဲ့ Version ပါ။ 1156 Pin ဖြစ်ပါတယ်။ i5-650, i5-660, i5-661, i5-670, i5 750 တွေထွက်ပါတယ်။
( လက်ရှိဘန်းကျော်စျေးကွက်မှာရောင်းနေတဲ့ i5-430, i5-450 တွေကတော့ ဘာ version တွေလဲ ကျနော်လဲမသိသေးဘူး … လေ့လာရဦးမယ် )။
32 nm အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းမှာ i7 တွေနဲ့ယှဉ်ရင်အများကြီးသက်သာပေမဲ့ Performance မှာတော့ အများကြီးကွာမသွားပါဘူး။
သူ့လဲ Core i7 မှာလိုပဲ turbo-boost သုံးနိုင်ပါတယ်။ Core i5 မှာ2core နဲ့4core ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။[/FONT]
[FONT="]1156 Pin Processor ပဲဖြစ်ပါတယ်။2core အမျိုးအစား တစ်ခုထဲပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။
i3 တွေဟာစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများပြည်သူသုံးအနေနဲ့ အတွင်ကျယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
32 nm အနေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။
core2ခုတူပေမဲ့ core2duo တွေထက် performance ပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်ပြီး вЂ¦ core2duo series တွေထက်လျှပ်စစ်စားပိုသက်သာပါတယ်။
Notebook တွေအတွက်ဆို ပိုပြီးတော့ ဘက်ထရီကြာကြာသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
[/FONT] [FONT="]Internet Journal မှာ အိုင်တီဦးဦး ဆောင်းပါးကိုမှီငြမ်းပါသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မေ့သွားခဲ့ရင်ပြန်လေ့လာနိုင်အောင် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦ [/FONT]
[FONT="]ဆက်လက်လေ့လာပြီး ဆက်ရေးပါဦးမည် вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦[/FONT]
[FONT="]မှားတာရှိရင်ထောက်ပြပြီး ပိုသိတာရှိရင်၀င်ရေးပေးသွားကြပါကုန် вЂ¦.. [/FONT]